English Speaking - Job Expressions (8) ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိုင်ဦး Sunday, May 22, 2016 SayarWinNaingOo No comments
ဒီနေ့ရေးတဲ့ သင်္ခန်းစာတွေမှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က အတွင်းရေးမှူး (စက္ကရီတေရီ) လျှောက်ထားစဉ်မှာ မေးတဲ့ဖြေတဲ့ပုံစံတွေ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပုံစံနဲ့ပဲ ပြန်ဆိုရေးသားလိုက်ရပါတယ် ၊ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ပဲ ဘုန်းကညာတစ်ပါး လုံးရာကပြားသွားခြင်း မဟုတ်ရပါကြောင်းခင်ဗျာ.. tongue emoticon
Unit (4) Skill and Experience ( ကျွမ်းကျင်မှု နဲ့ အတွေ့အကြုံ )
(71) Could you tell me where was your last job?
ခင်ဗျားရဲ့ အရင်အလုပ်က ဘယ်မှာလဲ ကျနော့်ကိုပြောပြနိုင်ပါမလား
(72) Certainly, I was working at the Asia Bank.
ပြောနိုင်ပါတယ်ရှင် ၊ ကျမ အာရှဘဏ်မှာ လုပ်နေခဲ့ပါတယ်
(73) And why did you leave that job?
ပြီးတော့ ဘာကြောင့် အဲဒီအလုပ်က ထွက်ခဲ့တာပါလဲ
(74) Because I was looking for more ofachallenge.
ဘာကြောင့်လဲဆို ကျမက စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုထက် ပိုမိုတာကို ရှာဖွေနေခဲ့လို့ပါပဲရှင်
(75) What were your favourite topics at university?
တက္ကသိုလ်မှာတုန်းက ခင်ဗျား အနှစ်သက်ဆုံး အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်တွေ က ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါသလဲ
(ဘာတွေကို အဓိက လေ့လာခဲ့သလဲ မေးတာမျိုးပါပဲ)
(76) My favourite topics are letter writing and filing studies.
ကျမရဲ့အကြိုက်ဆုံး အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်တွေကတော့ ပေးစာပြန်စာရေးသားခြင်နဲ့ စံနစ်တကျ စီစဉ်ဖိုင်တွဲခြင်း စတဲ့လေ့လာမှုတွေ ဖြစ်ပါတယ်
(77) What do you think are your strengths?
ခင်ဗျားရဲ့ အားသာချက်တွေက ဘာတွေလို့ ခင်ဗျား ထင်ပါသလဲ
(သူ့မှာရှိတဲ့ ခွန်အားကဲ့သို့သော အားသာချက်တွေကို မေးလိုတာဖြစ်ပါတယ်)
(78) I have good patience and English language skill.
ကျမမှာ ကောင်းကောင်းစိတ်ရှည်တာ နဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှုတွေ ရှိပါတယ်
(79) Are youacomputer literate?
ခင်ဗျားက ကွန်ပြူတာ ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ယောက်ပါလား
(80) Yes, I have the ability to operateacomputer and its associated office systems.
ဟုတ်ကဲ့ ၊ ကျမမှာ ကွန်ပြူတာရယ် သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရုံးသုံးစနစ်တွေကို သုံးစွဲလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ရှိပါတယ်
Topic (n) အကြောင်းအရာ ၊ ခေါင်းစဉ်
Filing (n) ဖိုင်တွဲခြင်း .. ဖိုင်တွဲခြင်းဆိုတာ အပေါက်ဖေါက်ပြီး ကောက်တွဲလိုက်ရုံမျှပဲမဟုတ်ပါဘူး ၊ နောင်အခါ ပြန်ရှာ ပြန်ကိုးကားလို့ရအောင် နံပါတ်တပ် ၊ အမျိုးအစားခွဲ ၊ အုပ်စုခွဲ ၊ စာရင်းသွင်းမှတ်တမ်းတင် ၊ မိတ္တူပွားသင့်ပွား ၊ ဖိုင်ပွားသင့်ပွား ၊ ဖိုင်လက်ခံတွဲ ..စသည်ဖြင့် လေ့လာလေ စနစ်ကျလေပါပဲ ။
သူလည်း မခက်ခဲပေမယ့် သူ့ပညာနဲ့သူပါ ၊ ရုံးအဖွဲ့မှူးတွေက ဒါတွေကို ကျွမ်းကျင်ရပါတယ် ..
Computer Literate (n) (Ofaperson) having sufficient knowledge and skill to be able to use computers; familiar with the operation of computers: ကွန်ပြူတာ ကျွမ်းကျင်သူ ..
ဒီစကားက ယေဘူယျဖြစ်နေပေမယ့် သူ့အဓိပ္ပါယ်က ကျယ်ဝန်းပါတယ် ၊ ကွန်ပြူတာနဲ့ ပတ်သက်တာ အထွေထွေ ဗဟုသုတရှိပြီး ဘာဖြစ်ဖြစ် သုံးလို့ရအောင် လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးပါ ၊ တစ်လုံးတည်းနဲ့ ခြုံငုံမိသွားတဲ့ စကားလုံးမျိုးပါ
Patience (n) စိတ်ရှည်မှု
Operate (v) စီမံသည် ၊ လုပ်ဆောင်သည် ၊ မောင်းနှင်သည်
Associated (adj) ဆက်စပ်နှီးနွယ်သော
Office System (n) ရုံးသုံးလည်ပတ်လုပ်ဆောင်မှုစနစ် (ကွန်ပြူတာစံနစ်နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတွေ)
work at က ဘယ်မှာလုပ်တယ်လို့ နေရာကို အဓိကပြောချင်တဲ့အခါသုံးပါတယ်
work for က လုပ်ငန်းမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ပြောချင်တဲ့အခါ သုံးပါတယ်
work inaကျတော့ team လိုမျိုး အစုအဖွဲ့နဲ့ အတူတူပူးပေါင်းလုပ်တာမျိုးကို သုံးပါတယ် wok inateam
work in ကျတော့ နိုင်ငံနဲ့ ဖြစ်စေ ၊ လက်အောက်ခံ ဌာနတစ်ခုခုမှာ ဖြစ်စေ အတွက် သုံးပါတယ် work in Korea, work in financial department